ငွေသုံးသိန်းရှိတယ်…ဘာရင်းနှီးရင် ကောင်းမလဲ?(အရမ်းကောင်းတဲ့ Idea လေးပါ) – Youth Bar
ငွေသုံးသိန်းရှိတယ်…ဘာရင်းနှီးရင် ကောင်းမလဲ?(အရမ်းကောင်းတဲ့ Idea လေးပါ)
သိပ်ကောင်းတဲ့ idea တစ်ခုကို မျှဝေပေး လိုက်ပါ တယ်။ အရင်းဆုံ ကိစ္စမတင်ပြခင် ပြောပြသင့်တဲ့ အဖြစ်အပျက် တစ်ခု ရှိပါတယ် …။
(၁၄)သင်းစလုံး ရင်းနှီးမှုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးပါက ၂ နာရီအတွင်း ရင်းနှီးခဲ့သည့် ပုံစံ၊ လုပ်ဆောင်ချက်၊ ပြန်ရလာသည့်ငွေ၊ စသည့် လုပ်ဆောင်ခဲ့သမျှကို အခန်းရှေ့သို ့ထွက်ပြီး ကျောင်းသား/သူ အားလုံးရဲ့ ရှေ့၌ပြန်လည် ရှင်းလင်း ပြောပြ ရမည်ဖြစ်သည် …။
အသင်း(၁)သင်းစီရဲ့ရှင်းလင်းပြောကြားရမည့် အချိန်ဟာ (၃)မိနစ် စီသာ ရရှိ မည်ဖြစ်သည်။ ဒီစိန်ခေါ်မှုမှာရင်းနှီးပြီး ငွေပြန် မရသည့် အသင်းရှိ သလို၊ငွေ အတော်အသင့် ပြန်ရ လာသည့် အသင်းလဲ ရှိသည်။ အံ့အားသင့်စရာက အသင်း (၁)သင်းဟာဒေါ်လာ (၆၀၀)ကျော်အထိ အမြတ် ရရှိအောင် စွမ်းဆောင် နိုင်ခဲ့ သည် ။ မြန်မာငွေ ကျပ်(ရသိန်း ၈သောင်း)ဝန်းကျင်၊ ထူးဆန်းသည်က စာအိတ်ထဲ ကငွေ (၅)ဒေါ်လာကို တပြား တချက်မျှ မထိခဲ့ဘူးလို့လဲ သိရသည် …။
ဒါပေမဲ့ ငွေလုံးဝ ရှာလို့ မရတဲ့ အသင်းလဲ ရှိပါတယ်။ သူတို ့အသင်းကတော့ စာအိတ်ထဲက ငွေ(၅)ဒေါ်လာကို ထီ သွားဝယ် လိုက်သည်။ ထီမပေါက် ပါ။ ကံနဲ ကစားလို့ အရင်းနှီးပါ ပြုတ်သွားရော။
ဒေါ်လာ (၆၀၀) ရှာနိုင်သည့် အသင်း၊ ဟုတ်ကဲ့….သူတို့ အသင်းကေတာ့ အိုင်ဒီယာ အတ်ာလေးကောင်းပါတယ် …။
စာအိတ်ထဲက ငွေ(၅)ဒေါ်ကို အာရုံမစိုက်။ အခန်းရွေ့ထွက်ပြီး ကျောင်းသား/သူများရဲ့ ရွေ့သို့ ရှင်းလင်းပြောကြားရမည်။ (၃)မိနစ် အချိန်လေးကိုသာ အသုံးချဖို့ အာရုံ စိုက်သည် …။
ကုမ္ပဏီ အကြီးအကဲလည်း သူတို ့အသင်းကို သဘောကြသည်။ ကမ်းလှမ်းမှု ကို လက်ခံပြီးဒေါ်လာ(၆၀၀) ထုတ်ပေး လိုက်သည် …။
အသင်းအားလုံး ရင်းနှီးပြီးဆုံး ချိန်။ အခန်းရှေ့ ထွက်ပြီး။ ကိုယ့်အိုင်ဒီ ယာငွေရှာ လာသည့် ပုံစံ။ ရရှိလာသည့် အတွေ့အကြုံတွေ ကို ရှင်းလင်းပြောပြ ကြ သည်။
ဘာ အိုင်ဒီယာမှ မထွက်ပါ စိတ်ကူးကောင်းမှလဲထွက်လာမှာ မဟုတ်။မင်းဝင်ငွေ များချင်လို့။ ကိုယ်ပိုင် လုပ်ငန်းလုပ် ချင်တာလေ။ ငွေရှာချင် တာလေ …။
ငွေရှာဖို့ အတွက်ကိုငွေမရှိဘူး ၊ အရင်းနှီးနည်းတယ်လို ့သာ စွတ်ပြောနေရင် ရယ်စရာ ဖြစ် လိမ့်မယ် …။
မြန်မာနိုင်ငံထဲက အရင်းနှီး နည်းနည်းနဲ ့လုပ်ငန်း စကြတဲ့ လူအတော်များများကို တွေ့ဖူးသည်။ အင်တာဗျူးဖူး သည်။ အဲ့ထဲက တစ်ယောက် အကြောင်းကို အရင်ရေး တင်ပြချင် ပါတယ်။ ကျန်တာက နောက်မှ ဆက်လက် တင်ပြမည် …။
သူကကောင်မလေးပါ။ ဒုတိယနှစ်၊ အဝေးသင်ကျောင်းသူ။ ၁၀ တန်းပြီး တာနှင့် နံနက် ၄ နာရီနိုးသည်။ဝက်ခေါက်၊ ကြက်ခေါက်တွေ ကြော်သည်။ စျေးသို့ တင်ရောင်းသည် …။
သိပ်မကြာမှာပဲ ဆိုင်ကို အလှဆင်ပြီး အမျိုးသမီးအိတ် ကလေးတွေ ကို အနည်းအကျင်း တင်ရောင်းသည်။ နောက်ထပ် မကြာခင်မှာပဲ သူသဘောကျသည့် အကျႌတွေ သူသဘောကျသည့် လက်ဆောင် ပစ္စည်းတွေကို အနည်းအကျင်း တင်ရောင်းသည် …။
သူမ လုပ်ချင်တာကို တစ်ခုပြီး တစ်ခု။ တစ်ဆင့်ပြီး တစ်ဆင့်။ တတ်နိုင်သလောက် လုပ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ဟုတ်ကဲ့ သူမလည်းသူ့ အိုင်ဒီယာကို အကောင်အထည် ဖော်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ စာဖတ်သူလည်း‌ ငွေကို ဦးစားမပေးသင့်။ ငွေကို အာရုံ မစိုက်သင့် …။
ငွေ ဒီလောက်ရှိမှငွေ ဟိုလောက်ရှိမှ ဆိုတာ ပတ်ဝန်းကျင်က သတ်မှတ် ထားတာပါ …။
သိပ္ေကာင္းတဲ့ idea တစ္ခုကို မွ်ေဝေပး လိုက္ပါ တယ္။ အရင္းဆုံ ကိစၥမတင္ျပခင္ ေျပာျပသင့္တဲ့ အျဖစ္အပ်က္ တစ္ခု ရွိပါတယ္ …။
(၁၄)သင္းစလုံး ရင္းႏွီးမႈျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးပါက ၂ နာရီအတြင္း ရင္းႏွီးခဲ့သည့္ ပုံစံ၊ လုပ္ေဆာင္ခ်က္၊ ျပန္ရလာသည့္ေငြ၊ စသည့္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သမွ်ကို အခန္းေရွ႕သို ့ထြက္ၿပီး ေက်ာင္းသား/သူ အားလုံးရဲ႕ ေရွ႕၌ျပန္လည္ ရွင္းလင္း ေျပာျပ ရမည္ျဖစ္သည္ …။
အသင္း(၁)သင္းစီရဲ႕ရွင္းလင္းေျပာၾကားရမည့္ အခ်ိန္ဟာ (၃)မိနစ္ စီသာ ရရွိ မည္ျဖစ္သည္။ ဒီစိန္ေခၚမႈမွာရင္းႏွီးၿပီး ေငြျပန္ မရသည့္ အသင္းရွိ သလို၊ေငြ အေတာ္အသင့္ ျပန္ရ လာသည့္ အသင္းလဲ ရွိသည္။ အံ့အားသင့္စရာက အသင္း (၁)သင္းဟာေဒၚလာ (၆၀၀)ေက်ာ္အထိ အျမတ္ ရရွိေအာင္ စြမ္းေဆာင္ ႏိုင္ခဲ့ သည္ ။ ျမန္မာေငြ က်ပ္(ရသိန္း ၈ေသာင္း)ဝန္းက်င္၊ ထူးဆန္းသည္က စာအိတ္ထဲ ကေငြ (၅)ေဒၚလာကို တျပား တခ်က္မွ် မထိခဲ့ဘူးလို႔လဲ သိရသည္ …။
ဒါေပမဲ့ ေငြလုံးဝ ရွာလို႔ မရတဲ့ အသင္းလဲ ရွိပါတယ္။ သူတို ့အသင္းကေတာ့ စာအိတ္ထဲက ေငြ(၅)ေဒၚလာကို ထီ သြားဝယ္ လိုက္သည္။ ထီမေပါက္ ပါ။ ကံနဲ ကစားလို႔ အရင္းႏွီးပါ ျပဳတ္သြားေရာ။
ကုမၸဏီ အႀကီးအကဲလည္း သူတို ့အသင္းကို သေဘာၾကသည္။ ကမ္းလွမ္းမႈ ကို လက္ခံၿပီးေဒၚလာ(၆၀၀) ထုတ္ေပး လိုက္သည္ …။
ေငြရွာဖို႔ အတြက္ကိုေငြမရွိဘူး ၊ အရင္းႏွီးနည္းတယ္လို ့သာ စြတ္ေျပာေနရင္ ရယ္စရာ ျဖစ္ လိမ့္မယ္ …။
ျမန္မာႏိုင္ငံထဲက အရင္းႏွီး နည္းနည္းနဲ ့လုပ္ငန္း စၾကတဲ့ လူအေတာ္မ်ားမ်ားကို ေတြ႕ဖူးသည္။ အင္တာဗ်ဴးဖူး သည္။ အဲ့ထဲက တစ္ေယာက္ အေၾကာင္းကို အရင္ေရး တင္ျပခ်င္ ပါတယ္။ က်န္တာက ေနာက္မွ ဆက္လက္ တင္ျပမည္ …။
သူကေကာင္မေလးပါ။ ဒုတိယႏွစ္၊ အေဝးသင္ေက်ာင္းသူ။ ၁၀ တန္းၿပီး တာႏွင့္ နံနက္ ၄ နာရီႏိုးသည္။ဝက္ေခါက္၊ ၾကက္ေခါက္ေတြ ေၾကာ္သည္။ ေစ်းသို႔ တင္ေရာင္းသည္ …။
ေငြ ဒီေလာက္ရွိမွေငြ ဟိုေလာက္ရွိမွ ဆိုတာ ပတ္ဝန္းက်င္က သတ္မွတ္ ထားတာပါ …။
ဒီစာက သင့္အတြက္အႀကိဳးရွိေစတယ္ဆိုရင္ Like & Share လုပ္ေပးၾကပါလို႔ …။ ။
ယနေ့ ညနေမှာ သာသနာ့ဘောင်ထဲဝင်ရောက်သွားပြီဖြစ်တဲ့ စိုးမြတ်သူဇာ